Ikhambi "Renamax": ukubuyekezwa kwamakhasimende
Ngokuthenga imoto yomuntu siqu, kuphela uchungechunge lwezindleko ezibalulekile eziqalayo. Phela, noma imuphi imoto, kungakhathaliseki ukuthi iyini inkululeko yokukhishwa kwayo, idinga isevisi yekhwalithi evamile. Futhi akukhona nje ngokuhlolwa okubucayi okuhleliwe, kodwa futhi mayelana nesidingo sokuqeda ukukhubazeka okungazelelwe, isibonelo, ukukhwabanisa emzimbeni wemoto. Okuningi kwalokhu kuthinta umshayeli we-novice, amakhono akhe akukuvumeli ukushayela ngokuhlanzekile. Abashayeli bezimoto abanalo ulwazi lokushayela, kanye nokuqonda okucacile nomqondo wemikhawulo yemoto yabo, engavumeli ukuba bahambisane nomuzi ngokukhululekile futhi ngaphandle kwemiphumela emibi. Ukukhwabanisa akugwemeki. Abanye ukuze basuse iphutha elingathandeki elinjalo, baphoqeleka ukuba bachithe isikhathi esiningi kakhulu lapho behamba emotweni yokuthengisa imoto kanye nezitolo zokulungisa imoto ukuze kusetshenziswe inqubo eqondile yokudweba umzimba. Ngenhlanhla, lokhu akuseyona ndlela kuphela yokuphuma kulezi zimo. Kunezindlela zesizukulwane esisha esingaqeda noma yisiphi isikhalazo eminzini yamaminithi, ukugcina abanikazi bemoto besidingo sokuchitha isikhathi sabo nemali ngeze.
Enye yezinto ezinjalo ezintsha i-Renamax. Abakhiqizi bayifaka njengethuluzi jikelele elikwazi ukususa ekuqaleni, kungakhathaliseki ukuthi umbala womshini. Ingabe lokhu kunjalo ngempela? Ingabe lesi sinqumo siphumelele kangaka, njengoba i-firm ithi ngakho? Iyini isimiso sokusebenza kwayo? Yini amakhasimende ayitshela ngokusebenza komuthi obuzwayo? Ukuze uthole izimpendulo eziningiliziwe kule mibuzo, funda kulesi sihloko.
Njengoba imibono yabathengi embonisweni we-Renamax isisombululo, ithuluzi lokulwa ne-scratch lingakusiza ukuba unqume unomphela umonakalo omkhulu emzimbeni wemoto, kungakhathaliseki ukuthi ukudweba kusetshenziswe kuyo. Iyini imfihlo yayo? Ukwakhiwa komkhiqizo kubandakanya izigidi zezinhlayiyana ezincane zokuphosa, ezigcwalisa ngokucophelela futhi ngokulinganayo yonke indawo ewonakele ebusweni. Emva kwalokho, izinhlayiya ezichazwe ziqala ukuheha izinhlayiya zepende ezungezile, ngaleyo ndlela zibuyisela ukubukeka kombukiso ekuqaleni komzimba wemoto. Le nqubo yonke ithatha isikhathi esithile.
Kuyini isici: i-agent engumbuzo ayiqukethe izinto ezinobuthi eziyingozi. Umphumela wesicelo sakho uqhubeka isikhathi eside. Futhi futhi le nsimbi isebenza ngokulinganayo nayo yonke imibala ye-shades ehlukahlukene. Isetshenziselwa ngokuphepha imoto emhlophe, emnyama nembala. Lokhu kungenxa yokuthi into esemqoka yombala wayo ayifuni.
Kulula kakhulu ukusebenzisa i-ejenti ecutshangelwa endaweni ewonakele. Inqubo yonke ayithathi engaphezu kwemizuzu embalwa. Futhi umphumela wayo ngeke uguquguquke ngemva kokugeza kokuqala, ukukhwabanisa ngeke kuboniswe. Isendlalelo sokuzivikela silungele ukumelana nabathintana abangaphezu kwenkulungwane ngamanzi okungafani okukhulu.
Iyini imfihlo yokusebenza kwezinto ezithintekayo? I-Renamax isebenza kanjani kumanxeba? Ukubuyekezwa kwamakhasimende batshela ukuthi abakhiqizi bangachaza yonke into esetshenziswayo. Ngakho-ke, okuyisisekelo salokhu kusebenza kanje: ngokushesha ngemva kokusebenza kwayo, izinhlayiyana ze-polymeric ezincane ziqala ukugcwalisa kancane kancane yonke indawo yokuqhafaza, ngaleyo ndlela kuvumela ukuba umzimba uphinde uphinde uhlale uphinde uphinde uqhubeke. Ngemuva kwalokho, izingulube zombala ngamunye, eziyingxenye yepende ngokwalo, faka ukuxhumana ngokuqondile nalezi zinhlayiya ze-polymeri, ngenxa yalokho okuqoshwe khona emthunzini oyifunayo. Ngakho-ke, isikhala siyanyamalala kuze kube phakade, asishiyi ama-depressions noma ama-bulges ngemva kwalo. Imoto ihlala kahle emzimbeni wemoto ukuthi ngisho noma othile ewufunda ngokucophelela, ngeke kwenzeke ukuthola indawo uRomamax eyonakaliswe kuyo.
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi i-ejenti ecatshangelwayo inokwethenjelwa futhi iqinisekisa umphumela omuhle kakhulu wokutshala, ongenamathele kumswakama, awunakho iphunga elimnandi, akudingi ukuba uxhumane namakhemikhali ayingozi, futhi inqubo yokudayisa ihamba ngokushesha futhi ngaphandle komzamo omkhulu.
Ngingayisebenzisa kanjani i-Remamax ukususa isikhalazo? Ukubuyekeza kwamakhasimende kuqinisekisa ukuthi lokhu kulula kakhulu.
Okokuqala, kubalulekile ukuhlanza ngokucophelela leyo ngxenye yomzimba owonakele futhi manje kudingeka udwebe.
Umshini ohlanzekile womshini kufanele womeke ngokuphelele, uhlanjululwe ngobumnene ngesisombululo se-degreasing, bese usebenzisa ngokucophelela inani elincane lomkhiqizo ngqo ekuqaleni.
Ikakhulukazi ukuze wenze le nqubo ikhululeke kakhulu kumnikazi wemoto, abakhiqizi bakhelwe ukufakwa kwesikhala ngendlela yokuthi akudingeki ukuthi basebenzise noma yiziphi izindlela ezingeziwe ezenzelwe isicelo sayo. Lokhu kuzosiza isiponji, esivele sinamathele ku-vial ngokwayo.
Ungahlola umphumela emva kwemizuzu emihlanu kuya kweyishumi. Ngalesi sikhathi, izinhlayiya ze-polymer zizozigcwalisa kancane kancane nge-voids, ukuze iziqhumane zivele ziguquke ngokoqobo.
Into ekhonjiwe ayiyona into enobuthi, ayinayo iphunga elibukhali, futhi alibandakanyi nama-chemical compounds. Lokhu kukuvumela ukuthi uyisebenzise ngokuphepha kuzikhala ezifakiwe.
Lapho ichaza ikhambi elithi "Renamax" emanxebeni, impendulo yamakhasimende iphakamisa eziningi zezintandokazi zayo. Phakathi kwabo, okulandelayo kubonakala ngokukhethekile:
Ukugcinwa isikhathi esanele kumnikazi wemoto, okungenjalo, kuzodingeka asebenzise uhambo oluya esitolo sokulungisa imoto, kanye nokulinda inqubo yokudweba;
Ishibhile esithandanayo uma kuqhathaniswa nezimboni ezifanayo zemoto;
Ikhono lokufeza ngokushesha umphumela oyifunayo noma nini nanoma iyiphi indawo;
I-neontoxicity ye-ejenti yabantu nezilwane;
Umphumela usindiswe isikhathi eside;
Ithuluzi kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Ochwepheshe bathi kanjani kula maphuzu? I-auto mechanics yabelana ukuthi ukudweba imoto kuyinkambinkimbi eyinkimbinkimbi, efuna ukuba khona kolwazi oluthile namakhono, ngakho-ke, ukuhlangenwe nakho emkhakheni obhekene nawo. Futhi, ngokudabukisayo, ukuqedwa kwamaphutha ngamanye izingxenye zomshini kuyinkimbinkimbi eyinkimbinkimbi nakakhulu. Kungani? Ngenqubo yokwenza le nqubo, akudingeki nje ukuthi upende isayithi ngokwalo, kodwa futhi ukhethe ngokucophelela umthunzi ofanelekayo, ozobe owufane kakhulu nombala lapho imoto yavezwa khona ekuqaleni. Ngokuqondene nethuluzi elithi "Renamax", liye lasiza kakhulu le nqubo izikhathi eziningi. Manje noma ngubani oshayayo ongenamakhono ochwepheshe uzokwazi ukubhekana nalo msebenzi ngaphandle kwezinkinga ezikhethekile.
Ngabe uhlobo luni lwezimoto i-polish "Renamax" efanelekayo? Ubufakazi beKhasimende basitshela ukuthi kufanele kusetshenziselwe ukulungisa amaphutha ekhaya ngendlela yama-scratches ezivela emzimbeni wezimoto ezehlukene ezihlanganiswe nanoma yiluphi uhlobo lwepende. Ngemuva kokuthi isiluleko sesetshenzisiwe, zonke iziphutha, ezithintekayo ngomphumela wayo, zinyamalale ngaphandle kokulandelela. Futhi ukwahlulela ngalokho amakhasimende akusho ngesisombululo se-Renamax, sisebenza ngempela. Uma nje usisebenzisa okokuqala, uzohlala ulahlekelwa isifiso sokuchitha isikhathi sakho nemali yakho ngokubheka izimboni zemoto.
Iningi labathengi lishiya impendulo enhle mayelana neRenamax. Ukususwa kwemijelo kuyinjongo yayo eyinhloko, lapho ithuluzi liphatha kahle khona. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi ungabi yisisulu sabahlambalazi, lapho yonke indawo ithengisa khona izimpahla ezincane. Ungakugwema kanjani ukuthenga inkohliso? Funda kabanzi ngalokhu kulesi sihloko.
Njengoba kubikwe ngezindlela zokubuyekezwa kwamakhasimende we-"Renamax", zithenge ezitolo zokuthengisa eRussia - umsebenzi awunakwenzeka. Lokhu kungenxa yokuthi isixazululo sokuthengisa sithengiswa ngokushesha kakhulu. Kanjani uthola "u-Renamax" (i-remedy for scratches)? Ukubuyekezwa kuncoma ukuthi uyi-oda kuphela kuwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizi. Indlela enjalo yokuthenga izoqinisekisa izinga eliphezulu lezimpahla ngentengo engabizi kakhulu.
Abanye bathi leli thuluzi laqala ukusebenzisa emisebenzini yabo eminye indawo yokubonisa, isibonelo, iMoscow "Renamax" (16 km). Ukubuyekeza, noma kunjalo, ayikwazi ukuqinisekisa ukuthi yini esetshenziselwa isixazululo nokuthi ngabe ithengwe kummeleli osemthethweni womenzi. Ngokwemfanelo, ungenza le nqubo ngokwakho ukuthi unikezwe ukuthi imali yokuqala engumbuzo iyatholakala.
Ingabe isebenza ngempela?
Njengokuba wonke umuntu owake wabhekana namakhohlisi uyazi, imakethe yamanje, kuhlanganise neRussia, igcwele abakwa-scammers abazama ukukhokha ngamakhasimende abathengi abangenayo isipiliyoni esanele endaweni ethile. Kulula kakhulu ukuguqula lolu hlobo lokukhwabanisa ngemikhiqizo emisha ngokuphelele, okuyiwona umthengi engazi kahle kahle, njengokwesibonelo, ngekhambi elithi "Renamax". Ubufakazi beKhasimende bubonisa ukuthi baye babhekana nama-counterfeits ngokuphindaphindiwe lapho bethengisa kusuka kubaphakeli ababazazayo. Umkhiqizi ugcizelela ukuthi isiqinisekiso sokuthenga isisombululo semfanelo ukusebenzisana newebhusayithi esemthethweni yenkampani.
Ochwepheshe bacela abashayeli abangenalwazi ukuba bayeke ukuhleleka imikhiqizo kumasayithi angabazekayo ngamanani akhangayo kakhulu. Ngemuva kwalokho, kungukuthi ababizi bezindleko eziphansi futhi bahoxisa abathengi kumanethiwekhi abo. Ngakho-ke, uma ungafuni ukukhohliswa futhi ufuna ukuthenga ikhambi ukususa imidwebo yekhwalithi ehloniphekile, uthenge lo mkhiqizo kuphela kumkhiqizi. Kulokhu, ngeke kube nezinkinga.
Uchaza kanjani isenzo se- "Renamax" okushiwo yimpendulo yamakhasimende? Njengomthetho, abathengi banemibono emihle ekusebenziseni kwayo.
Ekhuluma ngomuthi "we-Renamax", ukubuyekezwa kusho ukuthi iziphambeko eziye zaphela naso aziveli ngisho nangemva kwesikhathi eside. Abaningi bakwazi, ngenxa yakhe, ukunikeza imoto yakhe endala ukubukeka okuhle. Bayajabula ngenjabulo ukuthi "i-Renamax" ibasize kanjani ekukhaleni, ukubuyekezwa kwabasha. Njengomthetho, abashayeli abanjalo abakahle kakhulu ukuzwa ubukhulu bemoto, ngakho-ke ukushayela akuphumelelanga ngokwanele. Futhi lokhu, kuholela ekutheni kwenzeke inombolo enkulu yeziphambeko. Kodwa ngisho nakulokhu, njengoba ukubuyekezwa mayelana neRenamax etshela, ukususa izikhalazo akuyona inkinga. Ngaphezu kwalokho, ibuye ihlangane nalezo ziphutha ezavela kusayithi labadala. Ukuncoma kwabathengi kucacile: akuyona nje efiselekayo yokusebenzisa izindlela zokuqeda ukukhwabanisa, kodwa kubalulekile kunoma ubani ofuna imoto yakhe ibonakale ihle, kungakhathaliseki ukuthi unyaka wokukhishwa nokukhipha.
Indlela yokwelapha "Renamax" ichaza kanjani imibono yabathengi? Izimpendulo zabashayeli abasebenzisa izimoto zabo emisebenzini yobuchwepheshe, isibonelo sokugijima, baye bahlaziywa. Izimoto ezinjalo zidinga ukuvuselelwa njalo. Ukubukeka kwabo kufanele kube okufanelekile, ngakho-ke, njengomthetho, izimoto ezinjalo zihlinzekwa emahoreni okubonisa ngegama elihle elide elide. Nokho, yiqiniso, lolu hlobo lwezinsizakalo aluthile. Ngakho-ke, ngisho nalabo abashayeli bavame ukukhetha ukusebenzisa ithuluzi le-Renamax ngokwabo. Imibiko yempendulo yamakhasimende ukuthi lesi sici asizange sidumaze. Umphumela womkhiqizo uyamangalisa: ngisho nokukhubazeka okumangalisayo kukhishwa kalula. Ochwepheshe baqhubeka ukuphakamisa kubangani babo nabo bonke abafuna iseluleko kubo. Futhi izincomo zalabo abashayeli abanolwazi akufanele zithathwe. Ngakho-ke, ukwahlulela ukuthi ukubuyekezwa kwamakhasimende kuchaza kanjani i-Renamax, ikhambi lemikhonyovu libhekana ngokugcwele nendima yalo. Ingozi, futhi uyomangala ukuthi imoto yakho izobukeka kanjani.
"Renamax" - ithuluzi elisha elikwazi ukukugcina unomphela ukuba uvakashele izitolo zokulungisa imoto ukupenda umshini emva kokubonakala kokuqala. Manje, noma imuphi imoto izoba nethuba lokubukeka likhulu, kungakhathaliseki ukuthi unyaka wokukhululwa kanye nesikhathi esichitha enkonzweni.
Ukuze ufeze umphumela oyifunayo, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uthenga umkhiqizo wokuqala. Ngeshwa, imakethe, kufaka phakathi imakethe yezimpahla zezimoto, manje isikhukhumezwe nabaphangi, abazama ukugubha amakhasimende abo ngokuzulazula. Ukuthenga ithuluzi elinjalo elingasebenzi, abaningi bakhetha ukuyeka ngokuphelele ukusetshenziswa kwalesi sici. Ingabe benza okulungile? Cha! Nakuba kunjalo, umuntu angaqonda umuntu othi, ngemizwa ecasulayo, ufuna ukuveza ukudumala kwakhe okuthile okungazange kuhlangabezane nokulindelekile. Noma kunjalo, ukuzivikela kulolu hlobo lokukhwabanisa kulula kakhulu. Ukuze wenze lokhu, kwanele ukuthola umthombo wangempela we-Renamax futhi uyithenge kuphela kulo mshicileli. Kuze kube yimanje, lo mthombo yiwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizi, okubandakanya ukuthengiswa kwemikhiqizo yangempela yemvelo. Ngokubeka i-oda nayo, ungabazeki ukuthi uzothola ikhambi elithi "Renamax" lekhwalithi engcono kakhulu futhi ubhekane kalula nezikhalo ezikukhathazayo.
Qaphela ngokucophelela! Ungavumeli uzikhohlise. Le ndlela izokusiza ukuba ungachithi isikhathi sakho nemali ngeze. Futhi imoto yakho izobukeka isimanga isikhathi eside. Qaphela ukubukeka kwayo, futhi ngesikhathi esifanayo nedumela lakho.
Ukunyathelisa amathayi ngomshini
Ibhetri yemoto "i-Rocket": ukubuyekezwa nezici
Umthamo throughput ipayipi nge indlu ezweni Ukushisa ezimele